Fanafihana teny Ampitatafika : Jiolahy lovon’ny balan’ny tompon-trano
Teny ampitatafika, amin’ny lalana mankany Antsahadinta indray, no notafihan’ny jiolahy dimy nirongo basy poleta roa vita gasy, omaly tamin’ny 1 ora sy sasany maraina.
Taekwondo : Tompondaka lefitr’i Frantsa i Ny Aina
Norombahin’i Ny Aina Ramangasalama teo amin’ny sokajy latsakin’ny ny 54kg ny anaram-boninahitra tompondakan’i Frantsa, teo amin’ny Taekwondo.
Baolina Kitra Alfa : Hanomana hetsika goavana ny ligin’Analamanga
Kasain’ny ligin’Analamanga hanaovana fankalazana makotrokotroka ny fisokafan’ny taom-pilalaovana 2012 ho an’ny baolina kitra amin’ity taona ity.
Teo amin’ny fanaovana jery todika ny zava-nitranga tamin’ny sabotsy teny Ivato no nanamarihan’ny jly Ravalomanana Richard, kehiben’ny Cirgn Antananarivo, sady lehiben’ny Emmo Far, omaly teny Ankadilalana fa efa nanaiky ny hakan’ny fitondrana malagasy ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana any Afrika Atsimo ny fitondrana, ny 10 sy 11 oktobra 2011 lasa teo.
Baolina Kitra Analamanga : Voahosotra ho tompondaka ny HEzami sy FC Fanilo ary FTM
Nivoaka mpandresy ny nibata ny amboara tamin’ny fiadiana tompondakan’Analamanga teo amin’ny baolina kitra Analamanga diviziona faharoa ny Hezami.